Greta Thunberg ny lahatenin'ny Firenena Mikambana dia mampatsiahy ny lahatenin'ny "zazakely nariana tamin'ny incubator" ady tany Irak: Martin Vrijland
Filed in Fikomiana mihintsy, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 September 2019	• 20 Comments
Na iza na iza no mbola tsy mahatsapa fa Greta Thunberg dia mpilalao sarimihetsika marketing tsara, mbola miaina kely tokoa amin'ny lohany ao amin'ny fasika. Gaga aho mahita ireo hafatra ao amin'ny Facebook avy amin'ireo olona izay mpankafy tanteraka an'ilay tovovavy ary tena azoko antoka fa mpikatroka tena izy izay afaka mitety an'izao tontolo izao ary mahavita ny zava-drehetra. Satria miady hevitra bebe kokoa momba ny politika izy ireo hamonjy ny toetr'andro. Ny lahateny UN momba ny fientanam-po (izay tsy ho teo i Donald Trump, fa niseho tampoka) dia ny crème amin'ny tsindrin-tsakafo.
Ity fampielezan-kevitra tsara tarehy ity dia mihodikodina zavatra tokana ary izany dia: Mampifandray ny marika elatra havanana miorina tsara amin'ny fanoherana ny fanatontoloana, ny fisainana momba ny tsikombakomba, ny teorika manohitra ny tontolo, ny fitiavan-tanindrazana, ny tsy firahalahiana ny vehivavy ary ny politika-mivoatra-voalohany; avy eo dia mitsoka ny toekarena avy eo, ka ny marika havanana havanana no hotendrena ho antoko meloka amin'ny sisa amin'ny vahoaka mba hiatrehana karazana fitsikerana amin'ny marimaritra iraisana sy marobe. Greta Thunberg dia tafiditra ao amin'io lalao fampielezan-kevitra io. Mila miara-milalao amin'ny olona amin'ny fangirifiriany izy, mba hankahalany ireo fahasosorana 'elatra havanana' (izay tsy te hifikitra amin'ny fifanarahana toetr'andro 2015 Paris)! Tokony hankahala ny mpitsikera ny vahoaka.
Nampahatsiahy anay avy hatrany ny lahatenin'ny Firenena Mikambana nataon'i Greta Thunberg momba ny lalao mampihetsi-po mitovy amin'ny mason'ny 10 Oktobra 1990, raha nisy zazavavy Irakiana tanora iray nankany amin'ny Kongresy Amerikanina hilaza ny Kongresy Amerikana hoe ahoana ny fitondran'i Saddam Hussein, zazakely slammed avy amin'ny incubator amin'ny gorodona amin'ny hopitaly. Raha te hikasika ireo lamesa ianao dia tsara kokoa ny manao izany amin'ny alàlan'ny zatovovavy izay manome fijoroana ho vavolombelona. Aleo tovovavy efa ho lehibe, satria izay tena manintona ny eritreritra. Amin'ity tranga ity, taona vitsy taty aoriana, dia zanakavavin'ny ambasadaoron'i Kuwait tao Etazonia i Nayirah ity. Raha fintinina: fihetsika faran'izay madio ianao. Ny hetsika fampielezankevitra manontolo dia napetraky ny masoivoho marketing Hill & Knowlton.
Na manao ahoana na manao ahoana ny lainga dia tsy voakitika (Eny, satria ny 'fitaovam-piadiana mandripaka be') voaporofo- lainga), ny vahoaka dia mitohy tsy an-jambany ireo fomba fanaon'ny media.
Topazo maso ireo vehivavy roa amin'ny sarimihetsika etsy ambany. Samy voatsipy tsara. Samy mpilalao lehibe. Izany no antsointsika hoe: fampielezan-kevitra! Ny tanjona dia mazava aminao. Fintiko indray mandeha izao aminao. Donald Trump, ilay mpanohana ny Brexit ary antoko-pirazanana ankavanana (ankavia voafehy) dia tsy maintsy nanangana ny marika 'havanana' ('elatra havanana' amin'ny teny anglisy) ho mpanohana lehibe. Voatoritra avy eo ny toekarena ary hanondro ny rantsantanin'izy ireo ny karazan'olona mikorontana be dia be. Io vondrona io izay tsy te-hanao na inona na inona momba ny toetr'andro raha ilaina; na eo aza ny fiantsoana ara-pihetseham-po toy izany avy amin'ny taranaka tanora (izany hoe, hendry lavitra noho ireo amboadia vola taloha ireo). Io no paikady voafidy tamim-pahatsorana. Propagandira madio izy io. Ny tetika no iatrehana ireo karazana tsikera rehetra amin'ny tondrozotra mankany amin'ny fanatontoloana.
Midika ve izany fa tsy te hanao na inona na inona ireo toetrandro ireo olona eo ankavanana? Tsia, fa ny stigma miaro ny toetrandro dia mifandray amina hetsika politika ankavanana amin'ny alàlan'ity fampielezan-kevitra ity, ka tianao ny hanamboarana marika elatra havanana. Izay mitsikera rehetra dia mifandray amin'ny marika 'elatra ankavanana'. Ary miasa tsara izany! Tezitra ny vahoaka! Sahala tamin'izany fotoana izany amin'ireo zaza noroahina tamina incubator ao Irak. Manomboka mankahala an'i Trump ny vahoaka ary noho izany ny mpanohana ny Trump ary noho izany ny marika elatra havanana. Ary izany indrindra no tanjona. Amin'izay dia tsy tian'ny besinimaro ireo hevitra rehetra momba ny fanoherana ny fanatontoloana ireo, "fa mety ny firaisana tsikombakomba" i 911 ary betsaka kokoa amin'ny karazana fitsikerana ny filaharana efa napetraka taloha. Ny fihetseham-ponao dia mifamatotra amin'ny hatezerana amin'ny fihetsika nataon'i Greta Thunberg. Fampielezan-kevitra Smart!
Ny fisaintsainana dia tsy 'mety' ('elatra ankavanana'). Nasiana marika izany ho an'ny marika sy ny mpanao politika (mpisehatra). Ny fivarotana dia fanadiovana tanteraka, izay ifandraisan'ny rehetra izay mihevitra fa misy ifandraisany amin'io marika io. Izay ny lainga be! Ny mpanao politika sy ny media dia milina fampielezan-kevitra. Fotoana farany handinihana izany; aza mandeha amin'ny fitsapan-kevitra intsony fa hampangina ny gazety, fahitalavitra ary radio. Fofoanao ny fahitalavitra tariby, esory ny famandrihana ny gazety. Te hiaro ny ady amin'ny fampielezankevitra sy vaovao vaovao amin'ny alàlan'ny fahatongavanao mpikambana amin'ity tranonkala ity.
Lisitry ny rohy loharano: citizentruth.org
Tags: 2015, Donald, pihetseham-po, Featured, Greta, Gretha, fifanarahana klioba, Paris, teny, Thunberg, Trump, un, vn
24 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 39
Ity zaza mampatahotra ity dia Trekpop an'ny Elite Fascist ankavia.
Tokony ho hitan'ny rehetra fa ny 100 an'isa dia% Fake, mivoaka amin'ny diaper izy.
24 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 55
“Ny fanjakana dia tsy maintsy manambara fa ilay zaza no harena sarobidy indrindra ho an'ny vahoaka. "Raha mbola hita fa miasa ho tombontsoan'ny ankizy ny governemanta dia hiaritra tamim-pifaliana izay saika mety ho fatiantoka na fanafahana ny vahoaka ary saika misy fihoaram-pefy." - Adolf Hitler.
24 Septambra 2019 ao amin'ny 10: 57
amin'ny fomba fijery farany indrindra:
Eo ambany lahatsary YT
5 ora lasa izay (namboarina)
Noho ny hatsaram-panahy dia misy mividy soavaly na alika. ”
Fantatrao tsara fa manana ihany koa ianao ray aman-dreny izay mamela ny zanany hanao fampisehoana miaraka amin'i Paul de Leeuw, miantso izany hoe beetje amin'ny anarany, fanararaotana zaza fotsiny.
24 Septambra 2019 ao amin'ny 11: 33
Tsy ailika aminao i Greta, raha tovovavy io, dia nandalo fandaharana Monarch ...
24 Septambra 2019 ao amin'ny 11: 58
Fantatro tsara ny 99,9%
24 Septambra 2019 ao amin'ny 12: 07
Hitany fa misidina eny amin'ny 2 izy ireo: 47, ireo toetra mivaingana ireo fotsiny rehefa manana ny mic eny an-tanany izay tsy dia mifanaraka loatra. Salmon tart!
24 Septambra 2019 ao amin'ny 18: 19
Ary avy eo ny fanontaniana manaraka avy amin'ny olona iray amin'ny alàlan'ny mailaka avy ao amin'ny pejiko Facebook:
"Manahoana, maninona no tsy misy lahatsoratra momba an'i Greta Thunberg? Mora ny manisy rohy miaraka aminy sy i Svante Arrhenius ary ny asany amin'ny fiantraikan'ny maintso na ny Nobel Institute (Alfred Nobel) na ny anarana hoe Carl Peter Thunberg, freemason? Sarotra ny mitady na inona na inona momba izany.
Na i Luisa-Marie Neubauer sy ilay fototra iray novatsian'i Bill Gates sy George Soros
Ny diaben'ny mariazy amin'ny zoma (zoma ho avy) FFF 666 dia toa ny 'Reichsparteitag' ”
“Satria io dia azo raisina ho toy ny teôria iray fotsiny. Nohazavaiko ny tanjon'ny fandefasana an'ity ramatoa ity (zazalahy tampoka angamba) tao amin'ny lahatsoratro. ”
Mety ho mazava fa ny fanamarihana miharihary dia namboarina ao anatin'ilay fiasa PsyOp toy izany, izay natao handefasana ireo mpitsikera ho 'làlana fikarohana' efa notondroina mazava tsara.
Noho izany dia tsy mandray anjara mandritra ny fotoana fohy izahay. Mijoro amin'ny fomba fijeriko ny marika 'tsara' ('elatra ankavanana') sy ny anjara asan'ny marionette Thunberg hanameloka ity vondrona ity (sy ny stigma namboarina mafy be).
24 Septambra 2019 ao amin'ny 18: 21
Ary eny, mamaky tsara ianao: "mety ho ankizilahy tampoka".
Hoy aho hoe satria ny ankamaroan'ny asa PsyOp dia misy sosona fanampiny. Mihevitra aho fa i Greta dia hanompo ny fandaharam-panambaran-tena amin'ny transgender.
Leila Honig nanoratra hoe:
24 Septambra 2019 ao amin'ny 18: 38
de.voet clinic@telenet.be nanoratra hoe:
24 Septambra 2019 ao amin'ny 20: 36
Ny demony na tsy maintsy manana zaza sahirana ara-psikolojika aho dia naneho ny endriny tena feno fankahalana sy tsy fankasitrahana satria tsy azo fehezina mivantana izao tontolo izao. Ny zavatra lazainy momba ny fahazazany tamin'ny fahazazany sy ny fahatanorany dia mampiseho mazava fa tsy manavakavaka ary voafitaka ao anatin'ny fitaka ataony. Manelingelina tanteraka azy ity toe-java-misy ity ka tsy afaka misaina ara-tsaina intsony. Ny famelana ity zaza ity amin'ny fanaovana kianja tsy misy fitarihana mety dia mamono ny fiainany amin'ny finoana matoky fa ho faty izy. Mihazona ireo mpanao politika, ray aman-dreny ary haino aman-jery rehetra tompon'andraikitra amin'izany aho. Ny faminaniana histeriana toy izany dia nohodinihina imbetsaka. Ny orana asidra, Al Gore, sns. Ny kliobin'i Roma, iray amin'ireo andian-jiolahimboto lehibe indrindra, dia mandefa toe-javatra vaovao mahatsiravina isaky ny taona vitsivitsy izay dia mahazo miasa avy eo ireo mpanao politika mba handrosoana ny olon-tsotra.
24 Septambra 2019 ao amin'ny 20: 40
Homena tombony be loatra izany raha ny hevitro. Ny tovovavy kosa manao hetsika fotsiny.
25 Septambra 2019 ao amin'ny 02: 03
clown hafa eto, tonga miaraka amin'ny fiaramanidina hiresaka momba ny famoahana CO2 any Amsterdam. Tsy vahaolana ve ny fihaonambe video? Fa mahonoana .. 😀
25 Septambra 2019 ao amin'ny 10: 57
jereo ny zanany amin'ny fotoana fa ny hazo amam-pitaka, lehibe toy ny saosy dia tsy toa noho ny jiro ilay izy.
25 Septambra 2019 ao amin'ny 16: 34
Mamono olona malala ny fihetsika
Greta Thunberg dia nandresy £ 83,000 'Loka Nobel' hafa ho 'fangatahana politika manaitra ny hetsika maika »
25 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 13
Eny, tsy misy ny tsy fahampian'ny mpisehatra, trosa maimaim-poana ary misambotra zavatra eo amin'ny lafiny ianao. Soros amin'ny fandehanana sy ny famindrana vola i Soros sy ny ONG.
26 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 12
Efa voajanahary ny olona "normal" ka manadino. Ny tafika satana, ny mpisehatra, ny mpanao pôlitika ary ny mpiasam-pandrenesana hafa dia mazava fa tsy azo tavela. Ny teny filamatrako dia: Ianaro ny fomba hahazotoana an'io fiainana tsy maintsy iaretanao io noho ny antony sasany. Hehy ny adala ary mampitandrina ny zanakao!
26 Septambra 2019 ao amin'ny 11: 27
Ekeko tanteraka! indrindra ity farany, olona izay nampitandremana
mbola manisa ho roa.
sjon nanoratra hoe:
28 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 34
Maharikoriko ny fomba fampiasana io ankizy io amin'ny fampielezankevitra momba ny toetr'andro. Manodidina ny 80 taona lasa izay dia nanana vazivazy arahinay izay nampiasa ankizy amin'ny fikasana fampielezan-kevitra ...
29 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 09
Ny yacht € 4 tapitrisa izay niverenan'ny Greta tany Etazonia, dia fianakavian'ny fianakavian'i Rothschild, ary namindra azy ho eo amin'ny ekcoonista alemà Gerhard Senft. Niaraka tamin'ny dia i Pierre Casiraghi, zafikelinao na Andriamatoa Rainier III naterak'i Monaco ary mpisolovava Grace Kelly.
30 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 51
fitaka taloha izay mbola miasa
« Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersum ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?
"Ny zava-misy araka ny fahitanay azy" boky Martin Vrijland dia azo alaina izao »
Total visits: 12.992.087